"Veronica Mars" ၏ရာသီ ၄ အတွင်း (၂ အပိုဒ် ၁) | NAB သတင်းများ |4NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » "Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 2) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း
Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်သူ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် Giovani Lampassi (အလယ်, အပြာဦးထုပ်) ။ (© 2019 Warner Bros. Entertainment က Inc ကို All Rights Reserved ။ )
ဘယ်တော့လဲ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ပထမဦးဆုံးစက်တင်ဘာလ 2004 အတွက် UPN အပေါ်ပြသဖို့, စီးရီးကာလ၏အခြားရုပ်သံစီးရီးကနေမတူညီကြောင်းအထူးသဖြင့်ထူးခြားသော, မှတ်သားသိနိုင်ကြည့်ခဲ့ရသည်။ ပစ္စုပ္ပန်နေ့မြင်ကွင်းများများတွင်မူလတန်းအရောင်များပျော့လီဗာပူး, အဝါရောင်, အစိမ်းရောင်, ဘလူးနှင့်လိမ္မော်သီးထဲမှာချိုး frame ကိုအတူကြီးစိုးခဲ့ကြသည်။ (ထိုအင်္ဂါဂြိုဟ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရုံးအတွင်းပြတင်းပေါက်အားလုံးသည်စွန်းဖန်၏လုပ်ရမည်သလိုပဲ။ ) အဆိုပါမကြာခဏ flashbacks, ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အနိမ့်ထောင့်အပေါ်ကိုသူတို့အလေးပေးနှင့်အတူတစ်နက်ပြာရောင် filtered ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကိုကြည့်စီးရီး '' ကနဦးသုံးရာသီမှတဆင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (အဆိုပါစီးရီး '' တတိယရာသီနှစ်ခုကွန်ရက်များဖြစ်သော CBS နှင့်အတူပေါင်းစည်းပြီးနောက် UPN နှင့် WB ကိုအစားထိုးသော CW ပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ )
ဒါပေမယ့်ဇာတ်ကောင်ဟာ 2014 အတွက် reappeared သည့်အခါ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ရုပ်ရှင်, သူတို့တစ်တွေမဲမှောင်နည်းမှတ်သားသိနိုင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်။ အရောင်၏တမင်တကာလက်တွေ့အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုငြိမ်သက်အာခေါင်မှလမ်းကိုပေး၏။ (အင်္ဂါဂြိုဟ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှာအဘယ်သူမျှမကပိုစွန်းဖန်ပြတင်းပေါက်။ ) ဤသည်ပိုပြီးသဘာဝအမြင်အာရုံစတိုင် Giovani Lampassi ဓါတ်ပုံပညာ၏သစ်ကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်ကျောက်ကပ်ယူပြီးနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်လက Hulu အပေါ်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးသောစီးရီး '' belated စတုတ္ထရာသီအတွက်ဆက်လက်။ Lampassi မျိုးလုံလောက်စွာပြပွဲအဖြစ်ကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်စီးရီး '' လက်ရှိအမြင်အာရုံချဉ်းကပ်၏, မိမိပံ့ပိုးမှုများကိုအကြောင်းကိုငါ့ကိုစကားပြောဖို့ပဲ။
"ငါသည် feature ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်ဆီယက်တဲလ်အတွက်ပညာရှင်ပီသစွာ 1994 အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်နှင့်အစုအလင်းရောင်ဌာနအတွက်သေးငယ်စီမံကိန်းများနှင့်တစ်ဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အလင်းရောင်နည်းပညာရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတက်ငါ့အလမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့" Lampassi ကဆိုသည်။ "ငါသည်သို့ပြောင်းရွှေ့ Los Angeles မြို့ နှင့်, ထိုကဲ့သို့သောဆရာယောဟနျ Alonzo (ASC) တွင်, ပတေရု Levy (ASC, ACS), Geary McLeod (ASC) တွင်နှင့် Krishna ဟိန္ဒူ Rao ကအဖြစ်အကြီးအရိုက်ကူးရေးနှင့်အတူအများကြီးပိုကြီး-ဘတ်ဂျက် feature ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, ငါကိုကမ်းလှမ်းခံရခင်အထိသေးငယ်စီမံကိန်းများကိုရိုက်ကူးစတင်ခဲ့သည် ပါတီ Down, ရော့သောမတ်စ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်။ ဒါဟာအချိန်ပြည့်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုထူထောင်သောဤပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းပြသပြီးကတည်းကငါအမျိုးမျိုးသောတီဗီရှိုးရိုက်ကူးဖို့ပေါ် သွား. , ကဲ့သို့သော တစ်ညလုံး နှင့် ဘရွတ်ကလင်းကိုးကိုး။ ပြီးနောက် Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ပတ်ရစ်, ငါကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် တစ်ဦးကသန်း Little ကအရာ ABC ရုပ်သံများအတွက်ရိုက်ကူးဖို့, ငါပြသ၏ရာသီနှစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ဗန်ကူးဗားလက်ရှိဖြစ်၏။
အပေါ် "ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးစိန်ခေါ်မှု Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် လေးစားမှုပေးဆောင်ခြင်းနှင့်သေံနှင့်စတိုင်မူရင်းစီးရီးလုံလောက်စွာမစောင့်, ဒါပေမယ့်လည်းသူကကို update နှင့် Veronica ကြီးပြင်းခဲ့ကွောငျးဖျောပွဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါတို့သည်လည်းကြီးမားတဲ့စာမျက်နှာအရေအတွက်ရိုက်ကူးဒါကြောင့်အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းဂန္ကြည့်စောင့်ရှောက်အရေးကြီးသောခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတစ် claustrophobic လေထုထဲသို့ Kristen ရဲ့ဇာတ်ကောင်အတင်းရန်စံသတ်မှတ်ချက်ထက်သေးငယ် built ခဲ့ပြီးသောအချို့အစုံလည်းရှိခဲ့သည်။ အလင်းရောင်နီးကပ်အတွက်သရုပ်ဆောင်များကိုဒါနီးစပ်ခဲ့သောကွောငျ့သူများသည်စုံအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်အလွန်လျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်မှုသို့တဟုန်တည်းပြေးခဲ့ကြသည်ကျနော်တို့ဇာတ်စင်အာကာသအတွင်းကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်, အလင်းရောင်လ်တာစာသားတစ်ခုချင်းစီကိုကတခြားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်၏ထိပ်ပေါ်မှာအကြံအဖန်ခဲ့ကြသည်။ "
ငါအဘယ်ကြောင့် Lampassi ဟုမေး Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် မူရင်းမှတ်သားသိနိုင်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်မည်သို့တော်မူသိမ်မွေ့ကြည့်ပြပွဲရဲ့မဲမှောင်အောင်မြင်စွန့်ပစ်။ "ဟုအဆိုပါပြောင်းလဲမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းပထမသုံးရာသီ၏ကြည့်ဖို့အထင်ကရခဲ့စဉ်ခဲ့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, ဒါကြောင့်အချိန်အတွက်အထူးသကာလမှရက်စွဲပါနှင့်လည်း Veronica ရဲ့ဘဝနှင့်အတူသေံအတွက်ခဲ့ပါတယ် "ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ဒါဟာကိုလည်း CW ဤလောကသို့ fit မှကြည့်ခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ Veronica တစ်တက်စိုက်ပျိုးဗားရှင်းကိုမြင်လျှင်ခဲ့ကြသည်လက်ရှိ version ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကလူကိုသိချင်တယ်။ ကျနော်တို့အရောင်အာခေါင်ဖိနှိပ်နှင့်တစ်ဦး updated ကြည့်ဖန်တီးချင်တယ်။ ဒီအပြည့်နှက်အရောင်များသို့ဝေးလွန်းစွမပြုခဲ့သောအရောင်အာခေါင်ကိုရှာဖွေထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ Craig Stearns အတူလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့ဖို့လိုအပျသောနေရာများအတွက်အရောင်အချိန်ကိုက်အတွက်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် desaturated ။
"ကျနော်တို့က Panavision Vintage ချုပ်ဖန်နှင့်အတူသစ်ကို Panavision DXL2 အသုံးပြုသောကျနော်တို့ Panavision ပျစ်သီးကိုဖန်ကိုက်ညီဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ detuned zooms ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါသုံးခဲ့တယ် ဟောလိဝုဒ် Black ကကို Magic ပုနူးညံ့မှုတိုးပွားဖို့ဂန္ထဝင် soft နှင့်အတူစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဆိုပါအလင်းရောင် Arri က S-60 ရဲ့အတူဂန္အဖြိုက်နက်ယူနစ်တစ်ခုရောနှောခဲ့ထုံးစံစိတ်တိုင်းကျ Entertainment ကအလင်းဖြင့် LED မီးအလင်းရောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အသစ် CEL ထုံးစံလုပ်အလင်းအိမ်စံအလင်းအိမ်ပိုပြီးအရောင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပြင်းထန်မှုနှင့်လည်းနူးညံ့မှုအဘို့အအကြံအဖန်နှင့်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီနိုင်ဘူးရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းအိမ်ထားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သူတို့ဒါကြောင့်ပေါ့ပါးနေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအထွက်ရှိသည်ကြောင့်သူတို့တစ်တွေတော်တော်အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်ပါပဲ။ အကြှနျုပျ၏အကြီးအကဲအလင်းရောင်နည်းပညာရှင် Larry က Sushinski သည်ဤအသစ်သောအလင်းအိမ်ယူသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စံအလင်းအိမ်လျက်လူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဘုတ်အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်; သူကတကယ်ကရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
"ကျနော်တို့ကဖောင်ဒေးရှင်းမှာဂါရတ်ကွတ်နှင့်အတူ post ကိုအရောင်ကိုပြု၏။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုသို့သွားလေ၏မီ, Gareth ငါ updated အကြောင်းကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိခဲ့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ကြည့်ရှုပါ။ ဂါရတ်မူရင်းပေါ်တွင်အရောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, အဖြစ်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, ဒါကြောင့်သူကကျနော်တို့မူလလက်ခံပေမယ့်သေးကြည့်ကို update မယ်လို့မည်သို့မည်ပုံဖွဲ့စည်း၌ကြီးစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကို cut အပြီးသတ်ခဲ့သည်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်အားဖြင့်, Gareth အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး pass လုပ်ပေးမယ်လို့, ပြီးတော့ငါနောက်ဆုံးချိန်ညှိဘို့သူနှင့်အတူထိုင်ဖို့အတွက်သွားရလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အာဏာကိုပြတင်းပေါက်သုံးပါနဲ့နောက်ဆုံးအရောင်နဲ့ဆနျ့ကငျြဘအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ကြည့်တွန်းအားပေးကြီး။ "
အများကြီးကတည်းက Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် အမှန်တကယ်တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးသည်ငါတည်နေရာပစ်ခတ်မှုများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦး soundstage အလုပ်လုပ်ထံမှကွဲပြားဘယ်လိုစပ်စုခဲ့ပါတယ်။ "နှစ်ဦးစလုံးတကယ်ကသူတို့ရဲ့အားသာချက်နှင့်၎င်းတို့၏မဲနှိုက်ကျောရှိသည်," Lampassi ပြောတယ်။ ငါ့အဘို့, ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်း၏အလင်းရောင်ဆိုထားသည်ကားအဘယ်သို့ကြောင့် "ငါသည်တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးကိုချစ်။ စတိုင်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်ပါအတိုင်း, သင်တည်နေရာပြီးနောက်သင်လက်မှာတာဝန်ပြည့်စုံပါတယ်, ခွင့်ပြုမှသာအဘယျသို့နှင့် တွဲဖက်. စီမံကိန်းများ၏စတိုင်လ်ကိုဖမ်းယူနိုင်ကြသည်အခါ။ ဒါကရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်များ၏အလုပ်ပါပဲ။ '- ပြတင်းပေါက်များအတွက် 8ks နှင့်ငါ့ကိုဆနျ့ကငျြဘလျှော့ချရန်ဝစွာ bounce ပေး, ငါ 20 ချင်' 'ဒါပေမယ့်သင် soundstage ၏အန္တိမထိန်းချုပ်မှုများတဲ့ soundstage တွင်, သငျသညျဟုပွောနိုငျသောကွောငျ့ကအကြီးဖြစ်ပါတယ်။ တည်နေရာတွင်သည်, မြို့ယန္တရားပြတင်းပေါက်မှတဆင့်လာမယ့်မည်သည့်အလင်းရောင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘယ်မှာသင်ရိုက်ကူးစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်နေဝင်မတိုင်မီရိုက်ကူးဖို့အလျင်စလိုဖို့ရှိစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်တကယ်တော့နေရောင် ကိုပြု အရပ်သို့ဆင်းသွားသင်ကြံဖန်-နှင့်ငါကိုချစ်သောအရာကိုရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေဒါ, နေ့တူအောင်လုပ်ဖို့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်တဦးတည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုထွက်ရပ်: Logan မြို့တော်ခန်းမသွားနှင့်က Parker ကိုမြင်သောအခါ, ဒီညမှာလုံးဝသေနတ်နှင့်ကျနော်တော်တော်ကောင်းကောင်းပြုလုပ်ချွတ်ဆွဲထင်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသင်ဆဲဒီတော့အရာရာမှားယွင်းနေတတ်သည့်အခါကမှထွက်တွက်ဆနိုင်ဖြစ်ခြင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်, ပြပွဲ၏အသွင်အပြင်အောင်မြင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
ငါသည်ဤစီးရီးအတွက်ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးအဘို့အတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကိုဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Scott Winant အတူအမျှ Lampassi အတူလုပ်ကိုင်တွေ့ရှိခဲ့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် gratifyingly အပြုသဘောအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ချပစ်နှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း။ ၏ "ဒီတစျခုလုံးကိုသွန်းနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် မယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်စွာ-အပေါ်အချို့သောပြပွဲစုဝေးရောက်လာကြ၏ကြောင့်လူတိုင်းစည်းလုံး-ပေမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ၏အဆုံးအားဖြင့်နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတူတကွပြောင်းရွေ့နဲ့တူငါခံစားရတယ်ရှိရာအမှတ်ရကာတစျခုလုံးကိုရာသီကြာပါသည်။ ငါငါတို့အလိုသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအရာကိုကိုဖော်ပြရန်စတင်မယ်လို့ငါစကားပြောမည်ဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ငါအဘို့အသွားခဲ့ပါသည်အတိအကျဘာနဲ့ငါ့ဝါကျပြီးစီးလိမ့်မယ်။
"ဟုအဆိုပါသွန်းနှင့်အလုပ်လုပ်အထူးအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့သူမကသတိထားမိခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်တစ်ဦး '' ကြံ့ '' Kristen ကိုခေါ်လာတယ်။ ဒါဟာရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းပေမယ့်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းလှည့်ကွက်ခဲ့ကြနှင့်, မသာအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသည်ကိုသိသူမဟာအမှုအရာဖြစ်ပျက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုသိသည်။ ကနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသူမ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအဘို့မဟုတ်ကြလျှင်, ငါကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အမှုအရာအချို့ကိုပယ်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီမယ်လို့မသေချာဘူး။
"ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နောက်ထပ်ရာသီနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရမည် Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်; ငါကွဲပြားခြားနားတိုက်ခိုက်ရန်ချင်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါသည်။ ငါနောက်လာမည့်တဦးတည်းအဘို့အစီစဉ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ယခုသိကြကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆိုးဆုံးဝေဖန်တယ်ထင်ပေမယ့်ပြပွဲအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့ဘဲလျက်။ Kristen, Enrico နှင့်တစ်ခုလုံးကိုသွန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကူးအုပ်စုတစ်စုတို့ကသူတို့ကိုဖျော်ဖြေစောင့်ကြည့်ကာဂုဏ်အသရေဖြစ်ခဲ့သည်။ "
2020 NAB Show Pavilions Previews - အဆင့်မြင့်ကြော်ငြာခြင်းတဲ - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020
2020 NAB Show Pavilions Previews - Streaming Experience Pavilion - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020
2020 NAB Show Pavilion Previews - ဆက်သွယ်ထားသောမီဒီယာ | IP Pavilion - ဇန်နဝါရီလ 31, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်သော CBS FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Hulu Kristen Bell ကို ရော့သောမတ်စ် လှံ & Arrows အဆိုပါ CW အဆိုပါသည့် WB တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် UPN မူကွဲစနစ်များ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-19
ယခင်: High-Value ကိုတိုက်ရိုက်အားကစားများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ